IIMPAWU EZINGAMA-20 EZILUNGILEYO ZEKHITSHI EZIMNANDI EKUFUNEKA UZIJONGILE - ULUHLU LWETV
Iimpawu ezingama-20 eziLungileyo zeKhitshi eziMnandi ekufuneka uzijongile
I-Kitchen Nightmares ngumboniso kamabonwakude waseMelika ofana nohlobo lwayo lwaseBritane iRamsay's Kitchen Nightmares, eyimbonakalo yokwenyani
I-Kitchen Nightmares ngumboniso kamabonakude waseMelika ofana nohlobo lwayo lwaseBritane iRamsay's Kitchen Nightmares, eyimbonakalo yokwenyani ebonisa uChef Gordon Ramsay wodumo, owaphawula udumo oluvukayo lukaChef Ramsay kwimidiya yoluntu. I-Kitchen Nightmares, ephuhliswe nguDaniel Kay, ilandela umkhondo womnye umpheki odumileyo, uChef Anthony Bourdain.
Umpheki uGordon Ramsay umenyiwe ngabanini beeresityu ezijamelene nemicimbi kwaye abanakho ukubamba igama labo. Uthotho lwenyani lwe-TV lubonisa abanini berestyu yokwenyani abangaphumeleliyo ukufumana ishishini ngokuchanekileyo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezijolise ngokucacileyo kumdlalo. Le nyaniso ye-TV ilandela uChef Gordon Ramsay othi ngokupheka kwakhe okungaqhelekanga kunye nokulawula ukuqonda azame ukuvuselela iindawo zokutyela ezingaphumeleliyo ngokusombulula iingxaki ezinzima.
1. Inkampani ka-Amy yokubhaka
Ixesha lesithandathu, Isiqendu 15
UMlawuli (s): UJay Hunter
Abalingisi: UGordon Ramsay
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 9.2 / 10
Iqonga lokusasaza: Inkulumbuso yeAmazon
Inkampani ka-Amy's Baking yaseArizona yayiphethwe sisibini esitshatileyo esimeme uChef Ramsay ngokukhuthaza inkampani yabo yokubhaka. Ukutya kunye nokupheka kweNkampani yokubhaka ka-Amy zazisoyikeka ezingazange zijongwe ngababini kwaye zaqhubeka zisongela bonke abathengi bazo.
los angeles iinkqubo zikamabonwakude
Ezi zibini zazingagungqi kwaye zingabonisi naliphi na ithemba lokuphucula okwagqibela kukhokelela ekuvalweni kweNkampani yokubhaka ye-Amy izisa ukukhululeka kubantu baseArizona. Kodwa i-nightmare ekhitshini ye-Amy's Baking Company iyona nto ibaluleke kakhulu kwii-Nightmares ze-episodes ze-series.
Ixesha lesi-4, Isiqendu 12
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.9 / 10
Iphethwe ngabantakwabo bobabini uRami noMoe, iOceana yindawo yokutyela eNew Orleans, ethi yona ngokupheka kwayo okungathandekiyo inike ukutya okoyikekayo ngaphambi kotyelelo lukaChef Ramsay. Enkosi kwisikhokelo esinengqiqo sikaChef Ramsay, indawo yokutyela ivuselelwe, kwaye umgangatho wokutya kubandakanya ukupheka uphucule kakhulu. Isiqendu sokugqibela seli xesha siphawula ezona ziqendu zintle zasekhitshini zexesha lonyaka.
3. Ikhitshi leBurger (1 & 2)
Ixesha lesi-5, Isiqendu 5 & 6
IBurger Kitchen yayiyindawo yokutyela kaDavid Blaine yayiqhutywa lusapho lwamalungu ama-3, utata, umama nonyana. Izibini ezindala zazithintela inkululeko yompheki wentloko yokuphumeza nakuphi na ukuphuculwa ekuphekeni okuthintela ukusebenza kwendawo yokutyela kakhulu.
Ezi zibini zazingavumi malunga nendlela yazo yokuqhuba ishishini kwaye zange bammamele unyana wabo owayefuna ukuphucula igama lendawo yokutyela. Ngezibini ezineentloko zentsimbi ezingakulungelanga ukumamela nakuphi na ukucebisa, no-Chef Gordon Ramsay akakwazanga ukunceda i-Burger Kitchen ukuba ingavali.
4. I-Momma Cherri's Soul Food Shack
Ixesha le2, Isiqendu 3
UMlawuli: UChristine Hall
I-Momma Cherri's Soul Food Shack yayiyityotyombe lokutya eliqhutywa yintloko yompheki, uMomma Cherri owayekhonza inyama emnandi eyatshayela uChef Gordon Ramsay ezinyaweni zakhe. Nangona izakhono zokupheka kunye nokutya okuhanjisiweyo kwakulungile kakhulu kodwa i-aesthetics kunye nolawulo zazingafakwanga kumanqaku yiyo loo nto uMomma Cherri wacela uRamsay ukuba amncede.
Ngokhokelo lukaChef Ramsay, ityotyombe lokutya ngoku yindawo yokutyela egcweleyo kwaye ichuma kakuhle. Eli xesha lesibini lesiqendu somlingane waseBritane weKitchen Nightmares sesona siqendu sibalaseleyo seziqendu zeKhitshi Nightmares ezibonisa enye yezona khitshi zibalaseleyo ezazikhazimla emva kocingo lomlingo lukaChef Ramsay.
5. IMill Street Bistro (1 & 2)
iziqwenga zommandla ophezulu wangokuhlwa
Ixesha lesithandathu, Isiqendu 10 & 11
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.8 / 10
IMill Street Bistro yindawo yokutyela entle eOhio ephethwe nguJoe. Umnini uzele sesiqu sakhe kangangokuba akaze ahoye naziphi na iingcebiso zobulumko ezilungiselelwe ukuphucula umgangatho wokutya onikwa kwindawo yokutyela. Indawo yokutyela ithengisa ukutya okungaginyisi mathe okwonakalisa amava abo bonke abathengi kwaye umniniyo akaluceli uxolo ngolwaphulo-mthetho olubi.
Ixesha 1, Isiqendu 6
UMlawuli (s): UBrad Kreisberg
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.7 / 10
U-Sebastian uyi-pizzeria eCalifornia eqhutywa ngumnini we-fascistic, owayehlala elandela iindlela zakhe zolawulo lokuqhuba. Elona candelo limbi le-pizza ebelinikezelwe liyintlekele ngakumbi kunolawulo. Imenyu ye-bland yayiyindlela edidayo kubo bonke abathengi kwaye incasa yayingalunganga. Kodwa umnini akazange asamkele isiphoso sakhe kwaye waqhubeka nokuqhubeka neendlela zakhe zobuzwilakhe zokuqhuba ipizzeria ngemenyu yayo edidayo kunye nenkonzo yokutya eyoyikisayo.
Ixesha 1, Isiqendu 2
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.6 / 10
I-Dillon yindawo yokutyela kwisiXeko saseNew York, esebenza ngokudibanisa okungaqhelekanga kokutya kwase-India kunye nokutya kwase-Bhritane, konakalisa amava abo okutya kubo bonke abathengi bayo ngenkonzo yayo embi yesidlo sangokuhlwa. Indawo yokutyela ibeka umzekelo welinye ikhitshi elibi kakhulu ekuphekeni ukutya okubolileyo kwindawo engcolileyo.
Indawo yokutyela ibingalawulwa kakuhle ngenxa yesithintelo kulwimi kunye nokungaqondani phakathi kwabaphathi. Umpheki uGordon Ramsay wayenexesha elinzima lokubuyisa izinto ngolungelelwano.
8. Ithiyetha encinci
Ixesha lesi-5, Isiqendu 2
UMlawuli: UMartha Delap
IPiccolo Teatro yindawo yokutyela yemifuno yaseFrance eParis. Umpheki wale ndawo yokutyela wayengajonganga ndlela ibenye malunga neendlela zokupheka kunye nolawulo lwerestyu kunye nokutya okuhanjisiweyo akuzange kubhenele kubathengi. Kwindawo apho uninzi lwabathengi babengengabo abatya i-Piccolo's Teatro yayilawulwa ngendlela engaqhelekanga ethintela igama layo kakubi. Okokugqibela, uMpheki oyiNtloko kwafuneka agxothwe kwindawo yokutyela ukuze aqale ngokutsha. I-Piccolo Teatro yekhitshi yasebusuku yenye yezona ziqendu zibalaseleyo zeKhitshi Nightmares zexesha lesi-5 zomlingani waseBritane.
9. Izixhobo zeFenwick
Ixesha lesi-4, Isiqendu 2
IiFenwick Arms yindawo yentselo yaseBritane apho umniniyo ngokwakhe engomnye wabapheki. Umnini ngenkani uguqula imenyu ngokubandakanya izitya zokutyela ezifanelekileyo ezaphula inkcazo esisiseko yentselo apho abathengi badaniswe khona. Umpheki uGordon kuye kwafuneka asongele abanini ukuba baphucule izakhono zokupheka kunye nokuzolula zonke iziseko zemenyu ezenzelwe indawo yokupapasha. I-nightmare yekhitshi ye-Fenwick Arms yenye yezona ziqendu ezintle ze-Kitchen Nightmares zonyaka we-4 we-British counterpart of Kitchen Nightmares.
Amaphupha amabi ekhitshini ixesha lesi-2 isiqendu 1
10. Jikelezisa umsonto
Ixesha lesi-5, Isiqendu 11
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.5 / 10
I-Spin A Yarn yindawo yokugcina inyama eCalifornia eqhutywa sisibini esitshatileyo, ababesonakalisa ishishini kunye nokutya ngokungaziphathi kakuhle. Esi sibini sityhola indawo yokutyela ngenxa yolwalamano lwabo olungaphumelelanga ngelixa inyani yayiyenye indlela ejikelezayo. UChef Ramsay usindise indlu yokufa eshushu eqinileyo namhlanje kwaye ifumana igama elihle kubo bonke abathengi bayo.
11. Igalari 33 (1 & 2)
Ixesha le-6, Isiqendu 1 & 2
ILa Galleria 33 yindawo yokutyela yase-Itali eqhutywa ngoodade ababini, ababelifumene njengelifa ishishini lookhokho. Imicimbi yobuqu yoodade yaluthintela ulawulo lwerestyu kwaye kungekho namnye kubo ozama ukuthatha uxanduva kwivenkile yokutyela, yayijongise ekuweni. Omnye wabo dade wayelinxila logama omnye wayengumntu obalekayo owayehlala ezihambela kude kuzo zonke iingxaki zakhe. Enkosi ku-Chef Ramsay oodade bangavuselela indawo yokutyela eswelekileyo kunye nolwalamano lwabo.
Ixesha lesi-4, Isiqendu 11
I-Zeke yindawo yokutyela yeyendoda nebhinqa, eyayiyithenge kumniniyo. Iintsuku ezimnandi zokutyela kungekudala zaqala ukuba ngamaphupha amabi ngenxa yempatho-mbi. Abanini bamanje babekhohlakele kubasebenzi babo kwaye babaphakela nokutya okungathandekiyo.
13. Indawo yokutya eshushu
Ixesha le3, Isiqendu 1
Hot Potato Cafe yindawo yokutyela eqhutywa ngoodade abathathu ababeyizuze njengelifa kubazali babo. Oodade abathathu babengenamdla kangako kwishishini lokutyela kwaye bengakhange bahoye nakuphi na ukuphakanyiswa kweshishini. Umsindisi okuphela kwakhe, intloko yabapheki, inenekazi elinobuchule kunye nobuchwephesha, wayefuna ukushiya indawo yokutyela edinwa ngoodade abacaphukisayo, abashiya indawo yokutyela befuna kakhulu ukuhlangulwa.
14. Intombazana ebalekayo
Ixesha 1, Isiqendu 1
Ibaleke Intombazana yiklabhu yasebusuku ye-cum eqhutywa ngabahlobo ababini uJustin noRitchie. Umnini, uJustin wayehlala engavisisani nomhlobo wakhe ikwangumpheki oyiNtloko, uRitchie okhokelele kwindawo yentselo. Iphupha elibi lasekhitshini leNtombazana ebalekayo yenye yezona ziqendu zibalaseleyo zeKhitshi Nightmares zexesha loku-1 kuthotho olukhethekileyo lweeyure ezimbini ezibizwa ngokuba yiRamsay's Great Britain Nightmare.
ngumtoli kwi hulu
15. Intlanzi neAnkile
Ixesha lesi-5, Isiqendu 6
UMlawuli: UHeenan Bhatti
Intlanzi kunye ne-Anchor yindawo yokutyela eqhutywa yindoda nomfazi, ikwangabaniniyo. Zombini zazintle kakhulu kwizakhono zazo ekuphekeni nasekulawuleni. Ukutya okungathandekiyo kunye nolwahluko phakathi kwesi sibini bekuhlala kugcina abathengi kude kuthintela ishishini lokutyela ngendlela etshabalalisayo. Iphupha elibi lasekhitshini leNtlanzi kunye neAnchor sesinye seziqendu ezilungileyo zeKhitshi Nightmares zexesha lesi-5 leBritani elingumlingani weKitchen Nightmares.
Ixesha le3, Isiqendu 6
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.3 / 10
ILe Bistro yi-bistro ebekwe eLighthouse Point, eSouth Florida, yeyomntu onenkani ongoyikiyo nongumpheki oyintloko. Emva kokuba esebenze abapheki abadumileyo ngaphambili, umnini uphuhlise indalo yokuqhayisa kwaye waphulukana nomlingo wakhe ekuphekeni. Ukungafuni ukwamkela impazamo yakhe kunye nokuphucula ukupheka kwakhe umnini umba ingcwaba lakhe, ekhokelela kwindawo yakhe yokutyela esiya ekwehleni.
17. Ukuphuma kwelanga
Ixesha le2, Isiqendu 9
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.2 / 10
IFiesta Sunrise yindawo yokutyela eqhutywa nguVic, umniniyo, owayengabonisanga mdla kwishishini, kwaye wayefunxa nje imali kumfazi wakhe nakwintombi yakhe. Isiqendu sibonisa umzekelo oqaqambileyo wendlela yokubulala indawo yokutyela ngokungalawulwa kakuhle.
18. ILido yaseManhattan Beach
Ixesha le3, Isiqendu 5
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7.1 / 10
ULisa Hemmat, umnini weLido di Manhattan Beach eyindawo yokutyela ebekwe eManhattan Beach eLos Angeles County. Ibeka umzekelo wendlela intombazana enekratshi yesi sizukulwana esincinci enokulonakalisa ngayo ishishini eliqhuba kakuhle ngenxa yokungabi namava nokungakhathali. Umnini akahoyanga zindululo kwaye wanyanzelisa ezakhe iindlela zedemokhrasi kukhokelele ekuweni kweshishini lokutyela.
19. Indawo yokutyela yaseNino
Ixesha lesithandathu, Isiqendu 9
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 7/10
Indawo yokudlela yase-Nino yaseNtaliyane yindawo yokutyela yase-Italiyane, eyishishini losapho kwaye iqhutywa ngunyana omkhulu wosapho ohamba ngegama uNino. Izakhono zokuphatha kakubi zikaNino zazibulala indawo yokutyela yosapho awayefanele ajongane nayo nomninawa wakhe uMichael kunye nodadewabo uCarina. UNino ufuna uncedo kuMphathi uGordon Ramsay ukumnceda avuselele ishishini lakhe elalisifa.
20. Isithintelo seGrille
Ixesha lesithandathu, Isiqendu 13
Ukulinganiswa kwe-IMDb: 6.9 / 10
I-Prohibition Grille yindawo yokutyela ephethwe ngumdanisi esiswini egama linguRishi Brown. Indawo yokutyela ibekwe e-Everett, Washington, yenze ilahleko enkulu ngenxa yezigqibo zolawulo ezingalunganga ezenziwe ngumnini onekratshi owayengenalo ulwazi lwangaphambili kwishishini.
I-Kitchen Nightmares, enye yeenkqubo zoovulindlela zenyani zohlobo lwazo zibonisa uChef Gordon Ramsay owaziwayo ngezimvo zakhe ezingqongqo nezingqalileyo. Ngompheki owaziwayo kwihlabathi lonke okhokela abanini beendawo zokutyela ezingaphumeleliyo ukubuyisela amashishini abo kumkhondo, i-Kitchen Nightmares ibonelela ngemibono yezemfundo kwishishini lokutyela lisongelwe kukuzonwabisa nakwidrama.
Zilandelelana njani ii-movie ezimbi zomhlali ezingena kuzo
umzingeli x umzingeli
Umnxeba ongcono wesaul wexesha 3 ukukhutshwa komhla
Ixesha le-2 i-monster musume
masume kun akukho kuziphindezela
Uluhlu lwentando bhanyabhanya
indawo ethe cwaka 2 kwimfuno